भारतीय शराबी यता बढ्यो खराबी
भारतको बिहार राज्यमा मदिरा प्रतिबन्धित छ । त्यसको प्रभावस्वरूप नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रका बजारमा भारतीय मदिराप्रेमीको ओइरो लाग्ने गरेको छ । झापा, धनुषा, पर्सा, नवलपरासी आदि जिल्लाका सीमानिकट बजारमा भारतीय ‘रक्सी पर्यटक’ बढ्न थालेपछि होहल्ला र झैझगडाजस्ता सामान्य समस्यादेखि यौनधन्दा र हतियार ओसारपसारलगायत आपराधिक गतिविधि पनि बढिरहेका छन् ।
फिल्ममा फाइट र स्टन्टका दृश्य देख्दा दर्शक उत्तेजित हुन्छन्, जीउमा काँडा उमार्छन्, भरपूर मनोरञ्जन लिन्छन् । तर, त्यस्ता दृश्यका लागि हिरो, हिरोइन, स्टन्टम्यान र फाइटरले ज्यानको बाजी लगाएका हुन सक्छन् । सुरक्षा उपाय कमजोर हुने हुँदा सुटिङमा दुर्घटनामा नपरेका कलाकार भेट्न मुश्किल छ ।
वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदैछ । दुई दशकपछि जनताले आफ्ना गाउँठाउँ र शहरका प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैछन् । देशैभरिका मतदाता उत्साहित छन् । अझ पहिलो पटक भोट हाल्न लागेका युवा झन् व्यग्र छन् ।
सन्तानको डिमान्डै चर्काे !
आमाबाउ चाहन्छन्– छोराछोरी सुखी होऊन्, सन्तुष्ट होऊन् । सन्तानका इच्छा र चाहना पूरा गर्न जिन्दगीभर दुःख गर्छन्, कष्ट काट्छन् ।उनीहरूलाई घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भन्ने पुरानो उखानको हेक्का हुँदैन ।
योगबाट यौन सुख
सुखी र सन्तुष्ट यौन जीवनका लागि शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ । यसमा योगको भूमिका प्रमाणित भइसकेको छ ।
यस्तो होस् २०७४
नयाँ वर्ष भनेको नयाँ सुरुवात, नयाँ आशा, नयाँ विश्वास र नयाँ सिलसिला हो । शुक्रवारले काठमाडौँ, पोखरा, धरान, चितवन, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जका आमनेपालीसँग ‘नयाँ वर्ष २०७४ कस्तो होस् ?
गर्भवतीलाई जागिर धान्नै गाह्रो
गर्भवती महिलाले विशेष सेवा र स्याहार पाउनुपर्छ । कामकाजी गर्भवती महिलालाई जागिर धान्न गाह्रो हुन्छ ।
सेलिब्रिटी हुुनुका दुःख
देख्नलाई सेलिब्रिटीको जिन्दगी भव्य र शानदार देखिन्छ । मिडियाले पछ्याइरहेको हुन्छ, फ्यानहरूले अटोग्राफ लिइरहेका हुन्छन्, समाजमा उनीहरूको प्रतिष्ठा हुन्छ ।
आफ्नै मान्छेबाट डराउनुपर्ने कस्तो असुरक्षित समय हो यो ? श्रीमान्ले श्रीमतीको, प्रेमीले प्रेमिकाको, छोराले बाउको, साथीले साथीको ज्यान लिने घटना बढिरहेका छन् ।
तपाईंलाई केको टेन्सन छ ?
सबैलाई टेन्सन छ यहाँ । कसैलाई कामको टेन्सन छ, कसैलाई दामको टेन्सन छ, कसैलाई नामको टेन्सन छ ।
शहरीकरण र आधुनिकताले नेपाली शहरिया समाज सम्बन्ध ‘लिभिङ टुगेदर’ शैलीसँग परिचित हुँदै गएको त छ, तर यसलाई स्वीकार र आत्मसात् भने गर्न सकेको छैन ।
पुरुषको मोटोपन स्वास्थ्यको सवाल बन्छ भने महिलाको मोटोपन उसको सौन्दर्य तथा सम्पूर्ण व्यक्तित्वसँग जोडिन्छ ।
उत्तेजना समस्याले तनाव !
यौन र यौन जीवनका विभिन्न पक्षबारे नेपाली समाज राम्ररी खुल्न सकेको छैन । कतिपयका निम्ति सेक्स विशुद्ध शारीरिक कर्म हो ।
खुला र उदार छ, आजको युवा पुस्ता । उनीहरू प्रेम, सम्बन्ध, यौनलगायत जीवनका थुप्रै मामिलामा ‘फ्य्रांक’ छन् ।
लोकलाजका कारण रोग लुकाएर र पालेर बस्नु आफैँप्रति गरिने ठूलो अपराध हो ।लज्जाकै कारण रोग लुकाउँदा बाँझोपन, नपुंसत्वजस्ता जटिल समस्या आइपर्न सक्छन् ।
देशमा गरिखाने अवसर नपाएपछि गरिब नेपालीले विदेश त ताक्ने नै भए । तर, विदेश त्यति सजिलो कहाँ छ र ?
भनिन्छ– शंकाले लंका जलाउँछ । शंका मूलतः नकारात्मक सोच हो । यसकै कारण कसैको प्रेम टुट्छ, कसैको घरबार ।
यौन दुराचारीको निशानामा बालक
कलिला बालबालिकामाथि गिद्धे नजर लगाउने र कुत्सित इरादा पूरा गर्ने यौन दुराचारीहरू बढिरहेका छन् ।